မြင့်မားသောအပူချိန်သွေးခုန်နှုန်းအိတ်သံမဏိမြေမှုန့်စုဆောင်း China Manufacturer
သံမဏိ Bag Filter ကို,သွေးခုန်နှုန်းသံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောအပူချိန်သံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး
Botou Hengrui Environmental Protection Equipment Co. Ltd. [Hebei,China] လုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Manufacturer အဓိကစျေးကွက်များ: Worldwide ထုတ်ကုန်: 61% - 70% ဖေါ်ပြချက်: သံမဏိ Bag Filter ကို,သွေးခုန်နှုန်းသံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး,မြင့်မားသောအပူချိန်သံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး
Home > ထုတ်ကုန်များ > အိတ်အမျိုးအစားဖုန်ကောက်ခံရေးစီးရီး > အိတ်-type အမျိုးအစားဖုန်ဖယ်ရှားရေး > မြင့်မားသောအပူချိန်သွေးခုန်နှုန်းအိတ်သံမဏိမြေမှုန့်စုဆောင်း
ခြောက်သွေ့အမျိုးအစားမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းဖြစ်သောသံမဏိသွေးခုန်နှုန်းအိတ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်း, မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှားဘို့စိမ်အိတ် filter ကိုဒြပ်စင်၏ filtering ကို function ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာ (0.3um မြေမှုန့်အဘို့, ~ 99,5% 95% အထိထိရောက်မှု) မြင့်သောမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှု၏အားသာချက်များအားအလိုက်အထိုက်နေတတ်, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အသုံးပြုမှု, ဒါပေါ်မှာရိုးရှင်းဖွဲ့စည်းပုံ, တည်ငြိမ်အလုပ်, မြေမှုန့်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်လွယ်ကူသော, ရိုးရှင်းသောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်ရှိနေသည်။ ဖုန်မှုန့်ဖယ်ရှားရေးအဖြစ်အီလက်ထရောနစ်: အဆိုပါသံမဏိ duster ကျယ်ပြန့်ခြင်း (ကြိတ်ခွဲစက်, သကြားအပေါ်ယံပိုင်းအိုး, ရောနှော, ဖျက်ဆီး, screen ကိုအမှုန့်စက်နှင့်အခြားနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာဥပမာ) ကိုဆေးဝါး, ဇီဝဗေဒ, ဓါတုဗေဒ, အစားအစာနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အသုံးပြုသည် , စက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့, ချ. , အဆောက်အဦးပစ္စည်းများ, ကြွေထည်, တင်ချ, သတ္တုတွင်း, သတ္တုဗေဒနှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများဖုန်မှုန့်ကိုဖယ်ရှား။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်ဖုန်မှုန့်, ဘိလပ်မြေ, gypsum အမှုန့်, မီးသွေးအမှုန့်, bakelite အမှုန့်, ပလပ်စတစ်အမှုန့်နှင့်အခြို့သောအကွာအဝေးအတွင်းကောင်းသောမြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ မြေမှုန့်ဖယ်ရှားရေးထိရောက်မှုထက်ပိုမိုအသက်ကိုးဆယ်ကိုးအချက်ငါးရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဖုန်မှုန့် remover အမျိုးမျိုးအတွက်ကြောင့်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည်။
သံမဏိဖုန်မှုန့်စုဆောင်း၏ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းလွတ်လပ်သောဖုန်မှုန့်ထုတ်လုပ်အချက်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုအဘို့သင့်လျော်သည်, က situ မြေမှုန့်စုစည်းထဲမှာ, အစက်အပြောက်ကုသမှုပေါ်ထိထိရောက်ရောက်လေထု၏သန့်ရှင်းမှုသေချာစေရန်နိုငျသညျ, ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်းနှင့်အဆင်ပြေသည်နှင့်မှကျယ်ပြန့်သက်ဆိုင်သောဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ GMP အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်စီမံကိန်း၏သန့်စင်ခြင်းနှင့်မြေမှုန့်ကိုဖယ်ရှား။ မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံက box ခန္ဓာကိုယ်တစ်ပန်ကာ, တစ်ဦး filter ကိုအိတ်တစ်ဦးဖုန်မှုန့်စုဆောင်းကာ microcomputer controller ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ မိုဘိုင်းသံမဏိဖုန်မှုန့်စုဆောင်း, မြေမှုန့်စုဆောင်းစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုသံမဏိမြေမှုန့်ပိုက်, မြေမှုန့်ပါးပျဉ်း, လိုအပ်ကြောင်းဖွင့်ခြင်းနှင့်လည်ပတ်၏ဆင်း, 360 ဒီဂရီ, ပါဝါ 380V / 220V ၏အသုံးပြုမှုကိုသစ်ထုတ်ကုန်လက်တွေ့ကျတဲ့, တည်ငြိမ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အရသိရသည်ချိန်ညှိနိုင်ပါတယ်, လွယ်ကူပါတယ် သုံးပါနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရန်။
သံမဏိသွေးခုန်နှုန်းအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းအသုံးပြုမှုပတ်ဝန်းကျင်: အ flue ဓာတ်ငွေ့အားနည်းတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓါတ်ငွေ့သို့မဟုတ်ရေ, PH6 သို့မဟုတ် PH8 ပါရှိသည်နှင့်အခိုးအငွေ့တစ်ချိန်တည်းမှာအားနည်းတဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေပါရှိသည်။
အဆိုပါသံမဏိသွေးခုန်နှုန်းမြေမှုန့်စုဆောင်းတဲ့ filter ကိုအိတ်မှတစ်ဆင့် filtered သည်နှင့်မြေမှုန့် filter ကိုအိတ်အားဖြင့်အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပိတ်ဆို့ထားပါသည်။ အဆိုပါစင်ကြယ်ဓါတ်ငွေ့လေထွက်ပေါက်ကနေတဆင့်လေတိုက်တာဘိုင်များကဆေးရုံကဆင်းသည်နှင့်တိုက်ရိုက်အခန်းထဲသို့ဆင်းနိုင်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုတဲ့ကာလပြီးနောက်, ယူနစ်များ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုထပ်မံတိုးတက်နေသည်။ မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အခြေခံဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံငါးခုအစိတ်အပိုင်းများပါဝင်သည်:
1. အထက်သေတ္တာ: တစ်ရုတ်သိမ်းဖုံးပန်းကန်များနှင့်တစ်ဦးလေကြောင်းထွက်ပေါက်၏ရေးစပ်။
2. အလတ်စားသေတ္တာ: ကတစ်စိမ်ပန်းကန်နှင့် filter ကိုအိတ်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
3. နိမ့်သေတ္တာ: လေကြောင်းဝင်ပေါက်, ပြာ Hopper တွေလည်းနှင့်စစ်ဆေးမှုများတံခါးရေးစပ်။
အဆိုပါ 4. တန်းပြာစနစ်ကတစ်ဦး decelerating device နဲ့ပြာမှုန် conveying နှင့်ပြာများကိုဖျက်ထုတ်စက်ကိုပါဝင်ပါသည်။
အဆိုပါ 5. ဆေးထိုးစနစ်ထိန်းချုပ်မှုတူရိယာတစ်ခုထိန်းချုပ်မှုအဆို့ရှင်တစ်ဦးသွေးခုန်နှုန်းအဆို့ရှင်တစ်မှုန်ရေမွှားပိုက်တစ်ဦးလေကြောင်းအိတ်နှင့်အကာအကွယ် installation ကိုဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။
ဒါကြောင့်အပေါ်စက်, ခြောက်သွေ့စက်, လညျးမီးဖိုနှင့်ကြိတ်, ကြိတ်ခွဲကတ္တရာရောစပ်စက်ရုံများအတွက်ဖုန်မှုန့်ကောက်ခံရေးနှင့်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းသည့်စနစ်။
သံမဏိအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်းအဓိကအားသံမဏိပန်းကန်၏ချေးခုခံနှင့်ဓာတ်တိုးခုခံအသုံးပြုသည်။ အဆိုပါသံမဏိအိတ်အမျိုးအစားမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ရွေးချယ်ရေးနည်းလမ်းသာမန်သံအိတ် filter ကို၏အဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထုတ်လုပ်သူဒါပေါ်တွင်သင့်လျော်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဆိုက်နှင့်ပေါင်းစပ်ဖုန်မှုန့် remover, လေအသံအတိုးအကျယ်, လေတိုက်နှုန်းနဲ့ရှေးခယျြသငျ့သညျ။
အဆိုပါသံမဏိအိတ် filter ကိုအဓိကအားဖြင့်သံမဏိပန်းကန်၏စွမ်းဆောင်ရည်အရသိရသည်မြေမှုန့်စုဆောင်း၏အထူးအသုံးပြုမှုကိုဆုံးဖြတ်သည်။
ပထမဦးစွာ, အချို့ဖုန်ထူဓာတ်ငွေ့တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးဖြစ်ကြောင်း, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့က duster လုပ်ဖို့ချေးခုခံအတူပြားကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ သာမန်သံဖုန်မှုန့် remover အဘယ်သူမျှမချေးခုခံရှိပြီးသာသံမဏိဖုန်မှုန့် remover ရွေးချယ်နိုင်သည်။
နှစ်ယောက်တည်း။ သံမဏိဖုန်မှုန့် remover များ၏ဓာတ်တိုးခုခံမြေမှုန့်စုဆောင်း၏ဝန်ဆောင်မှုအသက်ကိုစောင့်နိုင်။
ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များစာရင်း: သံမဏိ Bag Filter ကို , သွေးခုန်နှုန်းသံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး , မြင့်မားသောအပူချိန်သံမဏိဖုန်ကောက်ခံရေး , သံမဏိ Filter ကို Bag , စက်မှု Bag Filter ကို Bag , စက်မှု Pulse Bag Filter ကို , single-စက် Bag Filter ကို , သံမဏိ Bag ကေ့ Filter